Global Voices teny Malagasy » Manahy Ny Hoaviny Ao Amin’ny Fanjakana Britanika Ireo Mpiasa Avy Any Timor-Leste Taorian’ny Brexit · Global Voices teny Malagasy » Print
Manahy Ny Hoaviny Ao Amin'ny Fanjakana Britanika Ireo Mpiasa Avy Any Timor-Leste Taorian'ny Brexit
Voadika ny 29 Jona 2016 5:50 GMT 1	 · Mpanoratra Dalia Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Angletera, Timor Atsinanana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Tamin'ny alàlan'ny fitsapan-kevibahoaka , nifidy ny hiala tao amin'ny Vondrona Eoropeana ny Fanjakana Britanika .Sary avy amin'ny pejy fandraisana Flickr gda, CC BY-NC-SA 2.0
Tamin'ny 23 Jona 2016, nanapa-kevitra  ny hanohana ny soso-kevitra hiala ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny ankamaroan'ny mpifidy tao amin'ny Fanjakana Britanika. Izay fantatra amin'ny anarana hoe Brexit, hanana fiantraikany goavana tsy ao Eoropa ihany fa any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao ihany koa ny vokatry ny fitsapan-kevibahoaka.
Iray amin'ireo zavatra tena mampanahy ireo olom-pirenena Eoropeana monina ao amin'ny Fanjakana Britanika ny fonenany sy ny zony hiasa ao. Moa ve ny governemanta Britanika hanery azy ireo hiala ao amin'ny firenena?
Ao anatin'izany, olona maro avy any Timor-Leste. Zanatany Portiogey taloha i Timor-Leste izay midika ihany koa fa ankatoavina ho teratany Portiogey, mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ireo Timorey.
Hatramin'ny 2002, rehefa nahazo fahaleovantena avy amin'i Indonezia i Timor-Leste, maro ireo Timorey no tonga tany amin'ny Fanjakana Britanika mba hitady asa tao amin'ny sehatry ny fanaovan-draharaha sy ny orinasa. Kely vola ny asa toy izany ao Timor- Leste, nefa midika ho fara fahakeliny 200 livra isan-kerinandro (tokony ho 270 dolara amerikana) na ny karama farany ambany any amin'ny Fanjakana Britanika. Raha tsara tantana ny vola , dia ampy tsara hiainana sy handefasana ihany koa ho an'ny fianakaviana any an-tanindrazana mijanona any Timor-Leste izany.
Manahy ny momba azy ireo ny Timorey sasany ao amin'ny Fanjakana Britanika taorian'ny fifidianana ny Brexit. Mety ho hangatahana hiala ny sata maha-mpifindra-monina azy ve izy ireo? Izany no ahiahy  resahana tao amin'ny Bilaogy Fifanankalozan-kevitra Haksesuk an'i​​ Celso Oliveira, ilay Timorey mipetraka ao amin'ny Fanjakana Britanika:
Mifandraika amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ny 23/06, misy ny ahiahy tokony hojeren'ny governemanta ao Timor-Leste momba ny hoavin'ny olona miaina ao amin'ny Fanjakana Britanika. Maro ireo Timorey no tonga tany amin'ny Fanjakana Britanika nanomboka tamin'ny nahazoan'ny firenena fahafahana tamin'ny Aogositra 1999 [rehefa nifidy fahaleovan-tena tamin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka iray malaza ny ankamaroan'ireo Timorey]. Ankehitriny, mbola misy ireo olona Timorey no mandao ny taniny mba hivelona any amin'ny Fanjakana Britanika. Ny fitadiavana fahavitan-tena ara-bola no antony lehibe indrindra mahatonga izany satria maro ny mpiasa no tsy mahazo afatsy 1 $ isan'andro fotsiny . Faharoa, miharatsy ny tsy fisian'ny asa raha mbola miakatra ny fitomboan'ny mponina. Ary fahatelo, maro ny olona no te hanova ny fiainany.
Mbola ampiharina amin'izao fotoana izao ny fifanarahan'ny Vondrona Eoropeana izay nanaiky ny fivezivezen'ireo mpiasa malalaka ao amin'ny Vondrona Eoropeana, nefa inona no hitranga aorian'ny Brexit? Mbola tsy azo antoka ny momba ny mpifindra-monina Portogey avy any Timor-Leste .
Raha namaly ny ahiahin'ireo Timorey monina ao amin'ny Fanjakana Britanika ny governemanta Timor-Leste, dia nandrisika  ny olony tsy hikoropaka izy ireo satria hisy ny fifampiraharahana eo amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny manam-pahefana Britanika momba ny fepetran'ny asa ho an'ireo olom-pirenena avy ao amin'ny Vondrona Eoropeana efa ao amin'ny Fanjakana Britanika.
Ny lefitry ny minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Fiaraha-Miasa ao Timor Leste, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, amin'ny fitadiavana fampitoniana ny ahiahin'ireo mpiasa Timorey ao amin'ny Fanjakana Britanika. Pikantsarin'ny gazety Timor Post.
Ho an'ny governemanta portogey kosa dia nanoro hevitra ny olom-pireneny izay miaina ao amin'ny Fanjakana Britanika izy mba hitaky ny karatra honina maharitra sady haka ny zom-pirenena roa sosona mba hiarovana ny zony.
Mandritra izany fotoana izany, nanoro hevitra ny Vondrona Eoropeana tsy hatahotra fa hanova kosa ny zava-misy ho toy ny fahafahana “haminavina indray” ny vondrom-paritra i Jose Ramos-Horta  ilay filoha an'i Timor-Leste teo aloha sady efa nahazo ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana:
Ny torohevitra tsara indrindra ho an'ireo mpitondra Eoropeana avy aty alavitra dia … tsy misy antony tokony hatahorana; mbola manana an'i Alemaina, Frantsa, Italia, Polonina, ary Espaina ny Vondrona Eopropeana izay manana ny harin-karena faobe mitambatra lehibe mihoatra lavitra noho ny kely ananan'ny Fanjakana Britanika.
Tokony hampiseho ny fahatoniana ireo mpitondra Eoropeana ary hanomboka haminavina indray ny Vondrona izay mifototra kokoa amin'ny vahoaka, mifandray mivantana indray amin'ireo vahoaka, fa ​​tsy hifantoka be loatra amin'ny fanjakazakan'ny mpitàna birao ao Bruxelles, ireo tena diso sy antony mahatonga ny fanaovana tsinontsinona sy ny fitsipahana; tokony hampitombo avo roa heny ny fampiasam-bola ho an'ny tanora sy ny asa ho an'ny rehetra, ny fampianarana sy ny fanavaozana ihany koa ny Vondrona Eoropeana vaovao fa tsy handany vola tafahoatra amin'ny fitantanam-panjakam-birao ao Bruxelles.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/29/84588/
 zom-pirenena roa sosona : http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=618655
 Jose Ramos-Horta: https://www.facebook.com/officialramoshorta/posts/1132685680116648